घरबाट श्रीमानसँगै हिडेकी श्रीमतिको बाटोमा अर्कै सगँ लभपरेपछि भयो यस्तो - Eall Nepal
घरबाट श्रीमानसँगै हिडेकी श्रीमतिको बाटोमा अर्कै सगँ लभपरेपछि भयो यस्तो
घरबाट श्रीमानसँगै हिँडेकी एक महिलाको यात्राकै बीचमा अर्कै व्यक्तिसँग माया बस्यो ।घरबाट निस्किदा श्रीमानसँग हिँडेकी ती महिलाको बाटोमा अर्कैसँग लभ परेपछि घटनाले नाटकीय रुप लिएको छ । अहिले उनी ती श्रीमान् र दुई छोराछोरीलाई छोडेर प्रेमीसँग जाने अडानमा छिन् । भारतको मध्य प्रदेशमा यस्तो घटना भएको हो ।
ती महिला केही समयअघि आफ्ना श्रीमानसँग ट्रेनमा दिल्ली जाँदा ट्रेनमै उनको एक व्यक्तिसँग चिनजान भयो । अहिले त्यही चिनजान प्रेममा बदलिएपछि ती महिला आफ्ना श्रीमान् र छोराछोरी छोडेर जाने अडानमा पुगेकी हुन् । उनले श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै पुलिस परिवार परामर्श केन्द्रमा निवेदन दिएकी छिन् ।
२३ वर्षकी अर्चना कुशवाहले ७ वर्षअघि तेजसिंह कुशवाहसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । उनका श्रीमान तेजसिंह फ्याक्ट्रीमा मजदुरी गर्छन् । महिलाले आफूले मोवाइलमा अरुसँग कुरा गर्दा आफ्ना श्रीमानले शंका गर्ने र यसका कारण घरमा झगडा भइराख्ने बताइन् ।
ती महिलाका अनुसार ट्रेनमा दिल्ली जाँदा भेट भएका युवकसँग उनको अहिले पनि दैनिकजस्तो फोनमा कुरा हुन्छ । यो कुरा श्रीमान् तेजसिंहलाई मन नपरेपछि उनले यसको विरोध गरे ।
तेजसिंहको विरोध मन नपरेपछि पत्नी अर्चनाले अहिले तेजसिंहसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने अडान लिएर बसेकी छिन् । काउन्सिलरले उनलाई सम्झाउन निकै प्रयत्न गरे पनि उनले सम्बन्धविच्छेदको अडान नछोडेको बताइएको छ
तपाईका लागि यस्तो छ २०७५ भाद्र ०१ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अगस्ट १७ तारिखका लागि राशीफल –
खेतको आलिको कुनामा भेट्टीएको बस्तुले सबैलाई चकित पार्‍यो ! आखिर के थियो त त्यो चिज